Ihe ndekọ nke onye Minista Minista Canada bụ Pierre Trudeau
Prime Minista nke Canada maka afọ iri na ise
Pierre Trudeau nwere ọgụgụ isi na-adọrọ adọrọ, mara mma, enweghị isi na nganga. O nwere ọhụụ nke Canada dị n'otu nke gụnyere ma Bekee ma French dịka otu, na gọọmenti etiti gọọmenti etiti, nke dabeere na ọha mmadụ.
Prime Minister nke Canada
Isi ihe dị ka Minista Minista
Ntughari nke iwu (vidiyo sitere na CBC Digital Archives)
Nchịkọta nke ikike na nnwere onwe
Ụkpụrụ Asụsụ Ndị Ọchịchị na ịsụ asụsụ abụọ n'asụsụ Canada
Mmemme omume udo na-agbasawanye
Nkọwa nke usoro iwu ọtụtụ
Usoro ihe omume Canada
A họpụtara Jeanne Sauvé nwanyị mbụ bụ Onye Ọkà Okwu nke House of Commons na 1980, mgbe ahụ, nwanyị mbụ gọọmenti General nke Canada na 1984
October 18, 1918, na Montreal, Quebec
Septemba 28, 2000, na Montreal, Quebec
BA - Jean de Brébeuf College
LL.L - Université de Montréal
MA, Economy Economy - Mahadum Harvard
Ụlọ akwụkwọ nke sayensị, Paris
Onye ọka iwu, onye nkụzi mahadum, onye edemede
Mmekọrịta ndọrọ ndọrọ ọchịchị
Party Liberal nke Kanada
Ịnyịnya (Distrikti Distrikti)
Ụbọchị mbụ nke Pierre Trudeau
Pierre Trudeau sitere n'otu ezinụlọ na-eme nke ọma na Montreal. Nna ya bụ onye ọchụnta ego French-Canada, nne ya sitere na nna ndị Scotland, ọ bụ ezie na asụsụ abụọ, na-asụ Bekee n'ụlọ. Mgbe ọ gụsịrị akwụkwọ, Pierre Trudeau gara ọtụtụ ebe.
Ọ laghachiri na Quebec, bụ ebe ọ na-enye nkwado maka òtù ndị agha na Asbestos Strike. N'afọ 1950-51, ọ rụrụ obere oge na Ụlọ Ọrụ Privy Council na Ottawa. Mgbe ọ laghachiri na Montreal, ọ ghọrọ onye nchịkọta akụkọ na onye na-achịkwa akwụkwọ akụkọ bụ Cité Libre . O jiri akwụkwọ a mee ihe maka ikpo okwu ndọrọ ndọrọ ọchịchị na nke akụ na ụba na Quebec.
N'afọ 1961, Trudeau rụrụ ọrụ dịka prọfesọ iwu na University of Montreal. N'ịbụ onye nwere mba na nkewapụ na Quebec, Pierre Trudeau rụrụ ụka maka ọchịchị gọọmenti etiti, ọ malitekwara ilegharị anya na ndọrọ ndọrọ ọchịchị gọọmenti etiti.
Ihe Trudeau malitere na ndọrọ ndọrọ ọchịchị
N'afọ 1965, Pierre Trudeau, onye ọrụ ọrụ ọrụ Quebec bụ Jean Marchand na onye nchịkọta akụkọ na-ede akụkọ Gérard Pelletier, ghọrọ ndị nnochite anya nhoputa ndi gọọmenti etiti a kpọrọ Prime Minister Lester Pearson. Ndị "Amamihe Atọ" niile meriri oche. Pierre Trudeau ghọrọ onye odeakwụkwọ ndị omeiwu na Prime Minista na onye ọka ụkọ ikpe. Dika Minista ikpe ziri ezi, ngbanwe ya nke iwu ịgba alụkwaghịm, na ịhapụ iwu banyere ime na ime, nwoke idina nwoke na ugboelu ọha na eze, nyere ya nlebara anya obodo. Nkwado siri ike ya na-akwado ọchịchị gọọmenti etiti na-achọ n'aka ndị mba ọzọ na Quebec nwekwara mmasị mmasị.
N'afọ 1968, Lester Pearson kwupụtara na ya ga-ahapụ akwụkwọ ozugbo ọchọtara onye ndú ọhụrụ, a kwenyekwara Pierre Trudeau ka ọ gbaa ọsọ. Pearson nyere Trudeau isi oche n'oche nchịkwa gọọmentị etiti na-achịkwa obodo, ọ na-agbakwa ozi ọma n'abalị. Nzukọ ndị ndú na-anọchi anya, ma Trudeau meriri ma ghọọ praịm minista. Ozugbo a kpọrọ ntuli aka.
Ọ bụ afọ 60. Naanị Canada na-abịa site na otu afọ nke ememe afọ iri na otu, ndị Canada na-enwe obi ụtọ. Trudeau mara mma, egwuregwu na ịgbacha nkụ na onye ndu ọhụrụ Conservative bụ Robert Stanfield yiri ka ọ na-adịghị ngwa ngwa. Trudeau duuru ndị isi obodo gaa n'ọtụtụ gọọmentị .
Gọọmenti Trudeau n'ime afọ 70
Na gọọmenti, Pierre Trudeau mere ka o doo anya na ọ ga-eme ka ọnụ ọgụgụ francophone nọ na Ottawa. A na-enye ndị isi ọnụ na cabinet na na Privy Council Office ndị francophones. O tinyekwara aka na nkwalite mmepe aku na uba mpaghara na ichota oru ochichi nke Ottawa. Otu iwu dị mkpa dị mkpa gafere na 1969 bụ Iwu Ndị E Ji Amụma , nke e mere iji hụ na gọọmenti etiti gọọmenti nwere ike ịnye ndị na-asụ Bekee na ndị French na asụsụ ha họọrọ.
E nwere ọtụtụ ihe na-eme ka "egwu" nke ịsụ asụsụ abụọ n'asụsụ Bekee Canada, ụfọdụ n'ime ha na-anọgide taa, mana iwu ahụ yiri ka ọ na-arụ ọrụ ya.
Ihe ịma aka kasịnụ bụ nsogbu Oketopa n'afọ 1970 . Ndị ụkọchukwu Britain bụ James Cross na Minista oru oru Labour Label La La, bụ La La, na Mil Laporte jidere site na Front de Libération du Québec (FLQ). Trudeau kpọrọ iwu Agha , bụ nke na-eme ka ndị mmadụ nwee onwe ha ruo nwa oge. Pierre Laporte egbuola oge na-adịghị anya, ma James Cross nwere onwe ya.
Gọọmenti Trudeau gbalịkwara imebi mkpebi na Ottawa, nke na-adịghị ewu ewu.
Canada nọ na-eche nrụgide na enweghị ọrụ ọrụ, na gọọmenti belatara ka ọ dị ole na ole na ntuli aka 1972. Ọ nọgidere na-achịkwa site na enyemaka NDP. N'afọ 1974, ndị isi obodo na ndị isi.
Onodu aku na uba, karia onu ahia, bu nsogbu buru ibu, Trudeau wee nye ndi mmadu iwu na Price Controls na 1975. Na Quebec, Premier Robert Bourassa na ndi ochichi nke ndi ozo weputara onwe ya iwu ndi ozo, na-akwado bilingualism na ime mpaghara nke French na-asụ asụsụ French na-adịghị asụ asụsụ Quebec. N'afọ 1976, René Lévesque duuru ndị Parti Québecois (PQ) na mmeri. Ha wepụtara Bill 101, iwu French dị ike karịa Bourassa. Ndị gọọmenti etiti obodo na-adabereghị na ntuli aka 1979 na Joe Clark na ndị Conservatives na-aga n'ihu. Ọnwa ole na ole mgbe e mesịrị, Pierre Trudeau mara ọkwa na ọ na-ahapụ ọrụ dịka onye ndú nke ndị Liberal Party. Otú ọ dị, nanị izu atọ ka nke ahụ gasịrị, ndị na-enwe Nkwado na-enwe Ọganihu enwekwaghị obi ike na Ụlọ nke Commons na a kpọrọ nhoputa ndi ochichi.
Ndị obodo ahụ mere ka Pierre Trudeau nwee ike ịnọgide na-abụ onye ndú ndị nwe obodo. Ná mmalite afọ 1980, Pierre Trudeau laghachiri dị ka Prime Minista, ya na ọtụtụ ndị ọchịchị.
Pierre Trudeau na Iwu
N'oge na-adịghị anya mgbe ntuli aka 1980 gasịrị, Pierre Trudeau na-eduga ndị gọọmenti etiti mba dị iche iche na mgbasa ozi ahụ iji merie ihe PQ na 1980 na Referendum Quebec na Sovereignty Association. Mgbe ọ bụla o meriri, Trudeau chere na ọ ghaghị ịgbanwe ọchịchị Quebeckers.
Mgbe ndị ógbè ahụ kwenyere n'etiti onwe ha banyere ọdịda nke iwu ahụ, Trudeau nwetara nkwado nke ụlọ ọrụ Liberal caucus ma gwa mba ahụ na ya ga-eme ihe na-enweghị ihe ọ bụla. N'afọ abụọ nke mbubata iwu ọchịchị gọọmenti etiti , na Queen Elizabeth na Ottawa, n'April 17, 1982. O kwadoro ikikere asụsụ na ikike agụmakwụkwọ na agbadoro ikike na nnwere onwe ndị mejupụtara ógbè itoolu, ma e wezụga Quebec. Ọ gụnyekwara usoro mmezi na "n'agbanyeghị iwu" nke mere ka ndị omeiwu ma ọ bụ ndị omeiwu nọ n'ógbè ahụ pụọ na ngalaba ndị dị na chaatị ahụ.
Ezigbo Ihe Banyere ógbè na ógbè Canada
Minista Minista Canada Kim Campbell
Otu esi choo maka ụlọ ezumike nká nke Canada
Ụtụ Ụtụ ahịa nke Canada site na mpaghara na Ógbè
Ịzụ ahịa na Mbupu na Canada
Ihe ndekọ banyere Louise McKinney
Otú Nova Scotia si nweta aha ya
Isi Obodo Obodo Canada
Ottawa, isi obodo Canada
Esi Egwuregwu Ọgụgụ asaa
Uzo iri abuo iji melite onodu igwe gi
Nkọwa na ihe atụ nke olu na-agbanwe
5 Nzọụkwụ iji họrọ Right Ball Ball maka gị
Save - izoputa, Nnaputa
Iji ihe eji eme ihe iji mee ka ọgụgụ isi dịwanye mma
Kasị Mma Ahịa Movies nke 80s
Ebube maka ihe osise a nyere ma ọ bụ na-enweghị ụbụrụ?
Osisi Qafzeh, Israel: Ihe akaebe maka ọnwu nke Middle Paleolithic
Ihe ojoo bọọlụ bọmbụ na ihe ị ga-eme mgbe ha mere gị
Ọchịchị anyanwụ na nke ọnwa na Islam
ONYE KWESỊRỊ Ụtọ maka Ịbanye na Nnukwu Nzukọ 12
Ezigbo Ihe Ngbaghara Na-egosi Mgbe Ebighị Ebi
Gịnị Dị Agbanwe na Sayensị?
Gaa Mgbaji: Otu Ntinye Maka Ndị Na-amalite Ịma Mmiri
Mee ka Izizi na ịrụ ọrụ na-arụ ọrụ na arụmọrụ nke Clever Improv
The History of Paperclip
Ahịa Ahịa kachasị mma
Enwere m ike iweghachi na mmemme gụsịrị akwụkwọ mgbe a jụrụ m?
Ndepụta nke Ụlọ Akwụkwọ Ọchịchị Na-ahụ Maka Ụlọ Akwụkwọ Ọchịchị Na-ahụ Maka Ụmụaka Missouri, K-12
Ndị Na-eto Eto Na-eto Eto Na United States Na-eyi Egwu Egwu North African nsogbu
Ihe ise kachasị mma eji ụgbọala maka nne ma ọ bụ nna nanị ha na-azụ ụmụ
Ọhụụ Ọha na Ahụ Ike n'oge Mmemme Ọrụ
Maka Ngalaba Ngalaba US
Otu esi eme ebe azu Jazz
SAT na ACT Scores maka Ịbanye na Maine Colleges
COHEN Aha njirimara na mmalite